SAWIRRO: Daad qaaday garoonkii diyaaradaha malaayiinta dollar lagu dhisay ee magaalada Baraawe - Calanka.com
Gudaha / Xulka
Sawirro laga soo qaaday garoonka diyaaradaha magaalada Baraawe oo uu dhawaan xarigga ka jaray ra`iisal wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa muujinaya daad ama roob gebi ahaan maasheeyay islamarkaana jeex-jeexay dhabihii ay diyaaradaha cago-dhigan lahaayeen.
Iyadoo ay horayba u taagneyd dood dhanka baraha bulshada ku faaftay tan iyo markii garoonkaasi xarigga laga jaray oo la xiriirta muuqaalka garoonka iyo lacagta la sheegay in ay ku baxday oo kor u dhaafeysa 4 milyan oo dollar ayaa waxaa hadana ceebtaasi bansiin kusii shubay roob dhawaan magaalada Baraawe ka da`ay oo garoonkaasi dar-daray.
Dhabbaha diyaaradaha cago-dhigtaan oo bacaad la simay uun ahaa ayaa waxaa uu daadku ka jeex-jeexday boholo, iyadoona qeybo kale oo garoonka ah ay biyo fariisteen.
Lacagta lagu dhisay garoonkan ayaa la sheegay in ay bixisay Midowga Yurub, waxaana ay dhismihiisa kala kaashatay dowladda, walow gadaal markii ay fadeexadu soo ifbaxday iska fogeysay dowladdu.
Si kastaba, waxa ka muuqda garoonkan ayaa loo badinayaa in musuq-maasuq baahsan uu jiro, waxaana xeeldheerayaal dhanka dhismaha ah ay sheegeen in xitaa lacag hal milyan oo dollar waxaan dhameyn eysan ku bixin dhismihiisa.